प्रथम नगर स्थरीय फुटबल सुरु वडा नं. ४ ले अग्रता लिएको हो - Enepalese.com
प्रथम नगर स्थरीय फुटबल सुरु वडा नं. ४ ले अग्रता लिएको हो
इनेप्लिज २०७२ पुष ३० गते १४:३२ मा प्रकाशित
पथरी, ३० पुस ।
मोरङको पथरीशनिचरे नगरपालिका–२ स्थीत बुद्ध युथ क्लबद्वारा आयोजित प्रथम नगर स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता आज विहीबारबाट सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व पथरी गाविस अध्यक्ष मोहन तुम्बाफोले यस्ता प्रतियोगिताले स्थानीय प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने बताउनु भयो । वडा नं. ४ र १३ बीच भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा ४ ले अग्रता लिएको छ । आफ्नो प्रतिस्पर्धी १३ नं.लाई शुन्यका विरुद्ध १ गोल अन्तरले हराँउदै वडा नं. ४ ले अग्रता लिएको हो ।
खेलको ५४ औं मिनेटमा वडा नम्बर ४ का जर्सी नम्बर ११ का पास्कल थापाले १ गोल गरेका हुन् । खेलको म्यान अफ द म्याच पनि थापा नै घोषित भए । वडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा नगरका १५ वडाको टिमहरु सहभागि छन् । प्रतियोगिताको विजेतालाई १५ हजार रुपैया र उपविजेतालाई ८ हजार रुपैया साथमा ट्रफी, मेडल प्रदान गरिने छ । त्यसैगरी प्रत्येक खेलमा म्यान अफ द सिरीज, उत्कृष्ट खेलाडी, वेस्ट गोलरक्षक, वेस्ट डिफेन्डर, वेस्ट खेलाडी, वेस्ट कोच र उत्कृट खेल अवधि भर ३ गोल कर्तालाई नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक कमिटिका संयोजक नैना सिंह राईले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिताको विजेताको पुरस्कार कतारमा रहेको पथरीशनिचरेका अनिल चुडाल, सन्जय गुरुङ र कुमार तामाङले र उपविजेताको पुरस्कार पथरी निमार्ण व्यावसायी संघले प्रायोजन गरेको छ । खेल सम्पन्न गर्न १ लाख ४० हजार रकम खर्च हुने आयोजकले अनुमान गरेको छ । नगर स्तरीय फुटबल प्रतियोगीतामा खर्च गरेर बचेको रकम आगामी हुने तेस्रो पथरी गोल्डकपलाई सहयोग स्वरुप दिइने आयोजकले बताएका छन् ।